Yunversitii Wallaggaa keessatti namni sadii ajjeefame jedhu – Welcome to bilisummaa
Yunversitii Wallaggaa keessatti namni sadii ajjeefame jedhu
Yakka waraannii fi poolisootni faashistii wayyaanee guyyaa kaleessaa barattoota Oromoo Yunversitii Wallaggaa karaa nagaa mirga falmatuuf yaalan irratti raawwatekeessaa suuraan kun waan haalaan xiqqoo ta’e ibsa. Barattootni 3 du’uun gabaafameera.
Haala kaleessa magaalaa Naqamtee ture VOA Afaan Oromoo guyyaa kaleessaa galgala darbe caqasuun dhugaa jiru baruun ni danda’ama. Kana caalaa waan eeggannu jiraa ree! Murtiin dhumaa kaanee gamtaan falmachuun ala homaa waan hafe hin jiru.
Previous NAAMUSA: Hirmaannaan yeroo ammaa joolleen Oromo gara social media godhaa jirtan nama boonsa
Next Mooraa Yunversiitii Jimmaa keessatti baay’inni waranaa dachaa baay’ina barattoota ta’uun mooricha dachii waraanaan weeraramte fakkeessee jira